UKUZIVOCAVOCA UKUNCIPHISA AMAFUTHA ETHANGA - PAMPEREDPEOPLENY.COM - IMPILO
Ufuna Ukulahlekelwa Amafutha Ethanga? Zama Lezi Zivivinyo Eziyisithupha
Izindaba USharad Pawar uzokhishwa esibhedlela ezinsukwini ezimbili
Ezezimali Ukuwa Kwentengo Yegolide Akukhathazi Kakhulu Ama-NBFCs, Amabhange Kudingeka Aqaphe
Ubuchwepheshe Izikweletu ze-AGR Nendali Yamuva Ye-Spectrum Engenza Umkhakha We-Telecom
Ezemidlalo I-Yonex-Sunrise India Open 2021 isethelwe uMeyi, ezobanjelwa ngasese
Ama-movie UGudi Padwa 2021: UMadhuri Dixit Ukhumbula Ukugubha Umkhosi Omuhle Nomndeni Wakhe
Izimoto IMahindra Thar Bookings Cross The 50,000 Milestone Ezinyangeni Eziyisithupha Nje
Ikhaya Ezempilo Ukudla okufanelekile Ukudla Ukufaneleka oi-Neha Ghosh Ngu UNeha Ghosh ngoJulayi 28, 2020| Kubuyekezwe ngu USusan Jennifer
Ngabe ijean yakho ilingana kancane? Ngabe ukhathazekile ngamafutha athe xaxa anqwabelene emathangeni akho futhi ucabanga ukuthi uzowashisa kanjani ngempumelelo? Ungabe usakhathazeka, kulesi sihloko sizokhuluma ngokuzivocavoca ukunciphisa amafutha ethanga.
Kuyinto ejwayelekile futhi enempilo ukuba namafutha omzimba futhi kudingeka inani elithile lawo kuphela ukuze umzimba usebenze kahle  . Kepha, okweqile kwayo kungadala izinkinga eziningi zempilo.
Bobabili abesilisa nabesifazane banamafutha omzimba futhi imvamisa kuthanda ukuqoqeka emathangeni, ezinqeni nasezinqeni [okubili] . Abesifazane, ikakhulukazi, banamafutha amaningi esihlalo esikhwameni agcinwa emathangeni angaphandle ngoba anokhalo olukhulu uma kuqhathaniswa nabesilisa  .
Kukhona izivivinyo ezithile ezingasiza ekwehliseni amafutha ethanga. Kepha kanye nalezi zivivinyo ukudla ukudla okunempilo nokufaka izinguquko ezithile zendlela yokuphila kuyadingeka ukukusiza ukuthi uthole imiphumela emihle ehlala njalo.
Sibhale phansi izivivinyo ezingasiza ukunciphisa amafutha ethanga.
Izikwele, ezaziwa nangokuthi inkosi yokuzivocavoca ikakhulu zibhekise kakhulu kuma-quadriceps nasezintanjeni emathangeni nase-gluteus  ,  . Ukuzijwayeza lo msebenzi kungasiza ukukhipha amathanga akho nokunciphisa amafutha ethanga.
● Yima uqonde imilenze yakho ububanzi ububanzi okwehlukanisiwe.
● Gobisa amadolo akho kancane ngokucindezela i-gluteus yakho emuva futhi ugcine umhlane uqonde.
● Yehla aze amathanga akho afane naphansi.
● Bamba lesi sikhundla imizuzwana eyi-10 bese usukuma kancane ubuyela endaweni ejwayelekile.
ungayikhipha kanjani inshungama kumajini
● Phinda inqubo ngamasethi ayi-10.
Ithiphu: Ungazikhiphi ngokweqile njengoba ungalimaza idolo lakho.
2. Izikwele ezibanzi
I-squat ebanzi noma i-sumo squat yehlukile kuneyesikwele esijwayelekile. Ku-squat ejwayelekile, imilenze ibekwa ububanzi benyonga futhi izinzwane zibheke phambili, kanti, esikweleni esikhulu izinyawo zisesimweni esibanzi izinzwane zivele nge-degree yama-45 degrees. I-squat ebanzi ihlose imisipha yangaphakathi yethanga, i-gluteus, i-quadriceps, imisipha kanye ne-hip flexors.
● Yima izinyawo zakho zibanzi ngaphezu kobubanzi behlombe (cishe ngamamitha amathathu kuya kwamane), izinzwane zavela kuma-degree angama-45 futhi ugcine izandla zakho ezinhlangothini zakho.
● Gcina umqolo wakho uqonde, ubheke uqonde nasesifubeni. Yehlisa ngokugoba amadolo akho.
● Uma amathanga akho esefana naphansi, beka amandla ezithendeni zakho ukumela umugqa owodwa.
● Phinda ukuvivinya umzimba izikhathi eziyisishiyagalombili.
Ithiphu: Qiniseka ukuthi awuwenzi ngokweqile amadolo akho.
3. Ukuphakanyiswa komlenze oseceleni
Ukuphakanyiswa komlenze oseceleni kungenye indlela yokuzivocavoca engafakwa esimisweni sakho sokuzivocavoca. Lokhu kuvivinya umzimba kubandakanya ukufaka umlenze kude nomugqa womzimba okwenziwa ngokulala ohlangothini lwakho. Ukuphakanyiswa komlenze oseceleni kuhlose i-gluteus, amathanga nemisipha ye-hip. Lokhu kungaba umsebenzi osebenzayo wokunciphisa amafutha ethanga  .
okufanele ukwenze ngokunyakaza okuxekethile
● Beka uhlaka phansi. Lala phansi ngakwesobunxele sakho noma ngakwesokunxele sakho, noma isiphi isikhundla onethezekile kuso.
● Gcina umzimba wakho ulayini oqondile kusuka ekhanda kuye ozwaneni uvule imilenze yakho phezulu nangaphezulu.
● Gcina ingalo eyodwa ngaphansi kwekhanda lakho ukwesekwa bese ubeke enye ingalo phambi kwakho ukuze uthole ukwesekwa okungcono.
● Ngenkathi ukhipha umoya, ngobumnene phakamisa umlenze wakho owodwa phezulu ngangokunokwenzeka. Musa ukwelula umlenze wakho.
● Donsela bese ubuyisela umlenze wakho endaweni lapho uqala khona.
● Phinda lo msebenzi izikhathi eziyishumi.
Ithiphu: Lapho wenza ukuvivinya umlenze ohlangothini, gwema ukuphakamisela umlenze wakho phezulu kakhulu bese wehlisa kancane lapho uzwa ubunzima kumhlane wakho ophansi.
Ref Ref: I-Youtube
Ukuzivocavoca Okungu-10 Okuhle Kwamehlo Akhathele
4. Phakamisa umlenze / i-gluteus
Ukuphakamisa umlenze we-Back / gluteus kuwumsebenzi omuhle wabaqalayo. Isebenza kwimisipha ye-gluteus nemisipha engakusiza ukufezekisa amathanga anciphile kalula ekhaya. Ngaphezu kwalokho, ukwenza lo msebenzi kuzosiza ukukhipha imisipha.
● Beka uhlaka phansi. Lala phansi ubheke uhlaka, uhlanganise iminwe yakho bese ubeka ibunzi lakho kuyo.
● Kancane, phakamisa umlenze wakho wesokudla bese wehlisa umlenze wakho phansi lapho uqala khona.
● Phinda lo msebenzi bese ushintsha imilenze yakho.
● Yenza lo msebenzi izikhathi eziyishumi.
Ithiphu: Musa ukugoba iqolo ngenkathi wenza lo msebenzi ukuvikela ubunzima kumhlane wakho ophansi.
I-Ref yesithombe: Healthline
5. Phakamisa umlenze wangaphambili
Ukuphakamisa umlenze wangaphambili kungenye indlela yokuzivocavoca engakusiza uthole amathanga anciphile. Lokhu kuvivinya kusebenza kuma-quadriceps naku-hip flexors. Ungenza ukuvivinya umlenze wangaphambili ngenkathi umile futhi ulele futhi.
● Yima uqonde ulinganise umzimba wakho ngokubeka sonke isisindo sakho emlenzeni owodwa.
● Gcina izinzwane namaqakala wakho emile futhi uphakamise omunye umlenze wakho phezulu naphansi phambi komzimba wakho.
● Qiniseka ukuthi imilenze yakho iqonde ngesikhathi sokuvivinya umzimba.
● Manje, yenza lo msebenzi ngokushintsha imilenze yakho.
● Phinda lo msebenzi izikhathi ezi-5 kuye kwezingu-10.
Ithiphu : Uma uphakamisa umlenze wakho phezulu, ungabuyiseli umzimba wakho ongaphezulu emuva. Yigcine iqondile.
Ukulala phansi isikhundla
ngingadla i-pasta ngesikhathi sokukhulelwa
● Beka uhlaka phansi. Lala phansi ngomhlane bese ugcina umlenze wakho wokunene uqonde ngqo phambi kwakho bese ugoba umlenze wakho wesobunxele ngezingalo ezibekwe eceleni kwakho.
● Khulisa kancane umlenze wangakwesokudla uze ufinyelele ebangeni elifanayo lomlenze wakho wesobunxele.
● Bese wehlisa umlenze kancane.
● Phinda lokhu ukuphindaphinda okuyishumi bese wenza okufanayo ngomlenze wakho wesobunxele.
I-Ref yesithombe: i-sportsinjuryclinic, ukuqina kwesibindi
unganciphisa kanjani amanoni ethangeni
6. Kukhahlela imbongolo
Ukuzivocavoca ukukhahlela izimbongolo, okwaziwa nangokuthi ukunwetshwa okhalweni okunezinyawo ezine kanye nokukhahlela emlenzeni ogobile, kuwukuzivocavoca okungcono kakhulu kokusebenzisa imisipha yakho ebuthakathaka, iqembu lemisipha emithathu elisezinqeni. Imbongolo ikhahlela ithoni, iqinisa futhi iqinise i-gluteus, ekunika izinqe eziqinile. Lokhu kuvivinya kuhlose i-gluteus maximus, enkulu kakhulu futhi enamandla kunayo yonke imisipha emithathu yobukhazikhazi.
● Beka uhlaka phansi. Thola phansi ezintendeni zezandla zakho nasemadolweni akho ukuthi izandla zakho zingaphansi kwamahlombe akho namadolo akho ngqo ngaphansi kwezinqe zakho. Gcina intamo yakho nomgogodla wakho kungathathi hlangothi.
● Cindezela izinqa zakho bese uphakamisa kancane umlenze wakho wesobunxele uye phezulu ophahleni ngenkathi uguqe idolo futhi ukhombe unyawo.
● Buyela esimweni esivamile.
● Phinda lo mkhuba izikhathi eziyi-12 ohlangothini olulodwa bese ushintsha izinyawo wenze okufanayo.
Ithiphu: Ngenkathi uphakamisa umlenze wakho phezulu ungagcini emuva emuva. Gcina iqolo lakho eliphansi liqonde futhi ugxile ku-gluteus yakho.
Izinguquko Zendlela Yokuphila Yokunciphisa Amafutha Ethanga
Inhlanganisela yokudla nokuvivinya umzimba kuyadingeka uma ubheke phambili ekulahlekelweni ngamafutha omzimba, kufaka phakathi amafutha ethanga. Nazi ezinye izinguquko zokuphila okufanele uzifake enkambisweni yakho yansuku zonke kanye nalezi zivivinyo.
● Faka phakathi ukudla okunothe amaprotheni ekudleni kwakho okufana namaqanda, imidumba, inhlanzi, amantongomane, imikhiqizo yobisi, inyama engenamafutha kanye nezinkukhu.
● Yidla ukudla okunothe ngamafutha enempilo njengamantongomane nembewu, iminqumo namafutha omnqumo, ukwatapheya njll.
● Yiba nezinhlobonhlobo ezahlukene izithelo nemifino enemibala .
● Phumula ngokwanele ebusuku.
● Gwema ukucindezeleka.
● Nciphisa ukusetshenziswa kotshwala.
● Gwema ukubhema.
U. Ingabe izikwele ziyawehlisa amafutha ethanga?
TO . Yebo, ama-squats asiza ukunciphisa amafutha ethanga.
U. Ingabe ukugijima kushisa amafutha ethanga?
TO. Ukugijima kuwumsebenzi omkhulu wokunciphisa umzimba. Ishisa ama-calories futhi isiza ukunciphisa amafutha omzimba. Ithonsa imilenze nezinqe, ngaleyo ndlela inikeze ukwakheka okuchazwe ngokwengeziwe ezinqeni nasemathangeni akho.
U. Yikuphi ukuzivocavoca okususa amafutha ethanga?
izithelo ezinhle kakhulu zesikhumba nezinwele
TO. Izikwele ezibanzi, ukukhahlela izimbongolo, ukukhuphula umlenze oseceleni, ukukhuphula umlenze wangaphambili ngezinye zezivivinyo ezingasiza ekuqedeni amafutha ethanga.
U. Yikuphi ukudla okufanele ngikudle ukunciphisa amafutha ethanga?
TO . Yidla izithelo nemifino, okusanhlamvu okuphelele, ukudla okunothe amaprotheni kanye namafutha anempilo njengamafutha omnqumo nama-nut.
U. Yini okufanele ngiyigweme ukuze ngilahlekelwe ngamafutha ethanga?
TO. Gwema ukudla okungenampilo okufana namafriji aseFrance, iziphuzo ezinoshukela, isinkwa esimhlophe, amakhekhe, amakhukhi, u-ayisikhilimu namaswidi.
U. Ungalahlekelwa ngamafutha ethanga ngokuzivocavoca umzimba kuphela?
TO. Cha, ukuzivocavoca kukodwa ngeke kusize ukudla okunempilo okunomsoco okuhlanganiswe nokuvivinya umzimba kuzosiza ekwehliseni amafutha emathangeni akho.
U. Kuzothatha isikhathi esingakanani ukulahlekelwa ngamafutha ethanga?
TO . Kuya ngesici sofuzo, isilinganiso semethabolic, ama-hormone nendlela yokuphila yomuntu.
USusan JenniferUdokotela womzimbaAmakhosi kuPhysiotherapy Yazi kabanzi
I-Mishti Doi Recipe: Ungayenza Kanjani I-Curd Enoshukela
I-Kahwa, i-Exotic Kashmiri Chai Recipe
Izinto Eziyishumi Ezenzekayo Lapho Uphuza Itiye Esiswini Esingenalutho
Indlela Efanele Yokulungisa Itiye Lesinamoni Ukwehlisa Isisindo
Ngeminyaka eyi-14 ka-Omkara, Izingubo ezimangazayo zikaBipasha Basu ezivela ku-'Namak 'ne-'Beedi' Song Decoded
UHrithik Roshan: Isithonjana Sesitayela
I-Eid Mubarak: Izindlela zokupheka eziyishumi ezijwayelekile zenyama yemvu Ukugubha iBakrid
I-Ugadi 2021: Isizathu Sokugubha Lo Mkhosi
Izinzuzo Eziyi-10 Zokunakekelwa Kwesikhumba Ijusi Lomehalane
Usuku Lokulondolozwa Kwezwe 2019: Umlando Futhi Kungani Kugujwa
Izindlela Zemvelo Zokuthola Amehlo Amahle
Isifuba Somoya Sobuntwana, Izimpawu Zaso, Izimbangela Zaso, Ukuvimbela Nokwelashwa
singadla umoba ngesikhathi sokukhulelwa
i-aluminium foil esetshenziselwa ukugoqa ukudla
izinwele ezilula ze-saree ekhaya
izikhundla zocansi ezishisa amakhalori abesifazane
yiziphi izinhlanzi ezilungele inhlanhla
usuku lwasaraswati puja 2019 etamilnadu
ukwenza intambo yamashiya ekhaya